Teeth Bleaching Kit | Indlela Engcono Kakhulu mhlophe Amazinyo Guide
Posts umake "Amazinyo amakhorali kit"
namazinyo zibe mhlophe , Amazinyo amathuluzi mhlophe , imikhiqizo Izinyo mhlophe
Ukuthola enhle amazinyo shiny is a dream of cishe bonke abantu futhi mhlawumbe eyakho. Uma amazinyo akho ahlale ophuzi noma ezinezici ngisho nangemva ukuxubha njalo ngomuthi wokuxubha okuhle, kungase kudingeke ukuba usebenzise noma yimaphi phezu kits counter amazinyo mhlophe njalo. Kukhona kweqembu Indlela engcono mhlophe amazinyo ezimakethe kanye nako inthanethi ungakwazi ukuphuma. Nokho, bonke of them cha ukusebenza okufanayo in mhlophe amazinyo. Indlela engcono kakhulu mhlophe amazinyo ukusebenza kangcono kanye nangesivinini, kuyilapho imikhiqizo ukhwaliti ongaphakeme mhlophe amazinyo ungalilahli. Ukusebenzisa amazinyo abajwayelekile mhlophe kits ezifana umlomo emathileyi, mhlophe si, mhlophe emapheshana okungaba kuhle ngokwenza amazinyo akho amhlophe, kodwa kits enjalo ngokuvamile ashiye side effects. Yingakho abantu abaningi abafuni ukusebenzisa kits enjalo. Uma ungomunye wabo ke ungakwazi ukuphuma ekhaya amazinyo mhlophe enjalo Indlela engcono mhlophe amazinyo ngoba Chile elilungile kanye fast.
Kunezizathu eziningi, okuyinto engenza amazinyo akho ezishintshe umbala. Ukubhema ugwayi, ohlafunwayo, ukuphuza iwayini elibomvu, soda, itiye nekhofi kungakwenza amazinyo ezishintshe umbala. Ngakho, ukuze senze amazinyo akho amhlophe, Kumelwe ngiyiyeke imikhuba enjalo kuqala. Inqubo yemvelo yokuguga imithi ethile njengensimbi supplements, mzimba, kanti ezinye elwa namagciwane okufakwa ekudleni kungathikameza umbala wamazinyo. Nali kulula, Kuyashesha futhi indlela engcono mhlophe amazinyo amakhambi.
Indlela engcono kakhulu mhlophe amazinyo
Ungasebenzisa ekhaya amazinyo mhlophe umkhiqizo ukuthi kukhona Indlela engcono mhlophe amazinyo ukwenza mhlophe amazinyo. umkhiqizo okunjalo kuba engabizi futhi kulula ukuyisebenzisa. Ngaphezu kwalokho, ungasebenzisa imikhiqizo enjalo ngaphandle kokuya iyiphi wamazinyo professional. A kit ekhaya amazinyo mhlophe ngokuvamile iza nazo mhlophe emapheshana kanye gel umlomo. Udinga ukubeka lokhu indlela engcono mhlophe amazinyo imikhiqizo nanjengoba kuqondiswe ku amazinyo akho for yi kangcono. Uma ufuna umphumela elindelekile kakhulu, Kumelwe ugcine imikhiqizo ezibekwe phezu amazinyo akho ngaphambi kokulala ebusuku, ngoba okungenani 10 imizuzu. Futhi udinga ukuwasebenzisa njalo.
Enye okuhle kodwa ezibizayo Indlela engcono mhlophe amazinyo kukhetha ukuvakashela ekamelweni wamazinyo. Lena indlela esheshayo kakhulu amazinyo mhlophe. A wamazinyo ngokuvamile uthola usizo kit amazinyo amakhorali, laser ukukhanya namazinyo gel batheleka ugqoko emlonyeni (kufanele igqoke ngaphambi kokulala) ukwenza amazinyo lesiguli mhlophe. A professional amazinyo mhlophe ukwelashwa zingakubiza endaweni ethile phakathi 250 USD futhi 900 USD. Nakuba kuyabiza kakhulu, kodwa inikeza umphumela best futhi buye baqhubeka bukhona.
Ungasebenzisa ekhaya amazinyo mhlophe izinto ukuthi kukhona Indlela engcono mhlophe amazinyo ukwenza amazinyo akho nasici-free. Ungasebenzisa baking soda futhi hydrogen peroxide ukwenza amazinyo akho amhlophe. Bobabili ezinhle kakhulu amakhorali agents ezisiza bleach amazinyo. I soda wokubhaka athile emvelweni futhi ngaleyo ndlela kusiza ukususa amabala amaTartar. Ungasebenzisa nabo ngokwehlukana noma ndawonye ngokwenza unama esihle kubo. Ungase futhi afafaze ingcosana baking soda on the wokuxubha ngenkathi ukuxubha.
Posted by mhlophe Amazinyo Guide - June 5, 2016 at 12:21 AM
Izigaba: Mhlophe Amazinyo Tips Tags: Indlela engcono mhlophe amazinyo, ekamelweni wamazinyo, Amazinyo amakhorali kit, amazinyo mhlophe, imikhiqizo Izinyo mhlophe, namazinyo zibe mhlophe